Fifidianana sefom-pokontany hoe? | Hevitra MPANOHARIANA
>Sa andeha atao hoe ara-panjakana na dia mety ho tsy ara-dalàna aza
Ha, ha, ha, ka voasary tsy an-tànana tsy atolo-jaza koh. Midera ny fitadiavana vaha-olana système-D ny Malagasy aho :)
Nampidirin'i tomavana @ 09:01, 2007-05-21 [Valio]
amiko kosa aloha mety ho samihafa kosa ny lanjan'ny teny hoe FILOHAM-pokontany sy ny hoe SEFOM-pokontany. Na ekeko aza fa samy "anaram-boninahitra" ireo, ny hoe "filoha" dia mety afaka mijanona ho satro-boninahitra monja ihany toy ny tendro amin'ny fikambanana maro samihafa izay manazava ny fisian'ny rafitra an-tanatohatra (hierarchie moral) eo amin'ilay andian'olona.
Ny hoe "sefo" kosa, tonga dia mitarika fijery hoe "hetsika na andraikitra voafetra sy voafaritra". Io angmba amiko no mahadika kokoa ilay antsoina hoe leadership, ilay fahaizana ho lehibe mpitarika sy mampihetsika ny zavatra rehetra, na mandrindra izany na mamorona hevitra ahafahana mihetsika.
Ataoko hoe efa rafitra mipetraka ho an'ny daholo be eran-tany kosa ny mahatonga ny hoe Filohan'ny Repoblika ka tsy andeha hamadihana azy ho sefon'ny repoblika raha tsy hoe handeha hitari-tafika hanafika firenena hafa angaha.
Asa raha mazava ilay nuances mba tiana nampitaina.
Nampidirin'i rajim @ 13:41, 2007-05-21 [Valio]
Izany hoe raha jerena amin'izay lazainao izay dia tsy tian'ny filoha hisy voninahitra kokoa ny "sefo"?
Ny filoha manko dia mandalo fa moa toy izany ihany koa ve ny sefo eo amin'ny resaka asa? Dia mandra-pahoviana izy izany no sefo? eo ilay fanontaniana!
Nampidirin'i jentilisa @ 15:11, 2007-05-21 [Valio]
Filoha sa sefo
Taloha koa ange izahay toa niantso hoe "ingahy lehiben'ny fokontany" e ! Sa tsy mahafaritra ny adidiny koa io ? Teo koa ny Ben'ny tanàna izay tsy fantatro na mbola fiantso ny maire amin'izao fotoana. Ilay sefo manko ange teny frantsay nadika maimaika fotsiny fa tena azo esorina raha ananantsika ny teny afaka milaza izany amin'ny tenin-drazantsika e(raha tena vonona hitandro ny teny malagasy). Indrindra fa raha ity fitondrana "tsy dia tia" frantsay ity, tokony ho natao tsifom-pokontany izany (avy amin'ny "chief") sa manjary mifangaro koa amin'ny chief of staff-n'ingahilehibe - ingahy filoha manko e !
Dia aoka re fa dia hahavalalanina izy ity. Ilay fifidianana izao ohatra ny nifidy chef de classe tany am-pianarana koh, lol
Nampidirin'i ikalamako @ 18:42, 2007-05-21 [Valio]
Nolazaiko hoe samy anaram-boninahitra hoy aho ireo roa ireo. Fa rehefa hoe filoha, seza fiandrianana no tonga an-tsaina voalohany ; mibaiko fa tsy mihetsika. Rehefa hoe sefo kosa, mpitari-tafika mitantana ny fanatanterahana no misongadina voalohany.
Averiko kosa anefa fa raha ankehitriny dia sefom-pirenena na sefom-panjakana izany no misy. (ny teo aloha dia filoha). Saingy ohatra ny mety mankarary sofina ny mandre izany mihoatra ny hoe filoham-pirenena nahazatra.
Eritreritra ny anay fa tsy hoe mitoky tena ho manana ny marina akory.
Nampidirin'i rajim @ 17:12, 2007-05-22 [Valio]